Sharciga Barashada: Hordhac
Qaaciddada wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan ee emaylkaaga
Kulanka kulanka shaxda emailka
Qaabka emaylka ah si aad ugu dhawaaqdo ka-qaybgalkaaga kulanka...
Email template ah codsi fasax ah
Furitaanka akoon bangi ajaaniibta iyo...
Posted by Tranquillus | Feb 9, 2022 | Shabakada
Dhamaadka koorsadan, waxaad awoodi doontaa inaad:
Horumarinta dhaqankaaga sharciga ah;
Faham habka sababaynta gaarka ah ee qareennada.
Barashada sharciga waxay ku salaysan tahay helitaanka "hab fikirka" sharci ah. Ujeedada koorsadu waa in la bixiyo dulmar ku saabsan habkan fikradda ah, iyada oo la marayo qaybaha ugu muhiimsan ee mawduuca.
MOOC waxay markaa bixisaa dulmar guud oo sharciga ah. Waxaa si gaar ah loogu talagalay:
ardayda dugsiga sare ee raba inay bilaabaan barashada sharciga, iyagoon garanayn waxa dhabta ah ee daraasadahani ka kooban yihiin.
ardayda tacliinta sare waxay u badan tahay inay qaataan koorasyo ​​qaanuun ah inta ay ku jiraan waxbarashadooda jaamacadeed, kuwaas oo aan u baahnayn inay yaqaanaan habka caqli-galnimada.
Sii wad akhrinta maqaalka goobta asalka ah →
Sharciga Barashada: Hordhac Juun 30th, 2022Tranquillus
READ Xaq miyaan u leeyahay inaan ka codsado shaqaalaha in laga tallaalo Covid-19?
horeAftahannimada dadka oo dhan: erayada ku hadasha, turuqa-yaqaanka iyo daaweeyayaasha hadalka
socdaKu bilow wax soo saarka dhijitaalka ah
Xirfadlayaal dib-u-tababar: miyaad ka fikirtay shaqo-barasho?
Maalgelinta tababarkaaga: qaaciddada miisaaniyad kasta
Xirfadaha Grand Paris ayaa muujinaya
Aasaaska adeegga macaamiisha